FDG Filannoo Wayyaanee Fesheleessuu Irratti‏. | QEERROO
Miidiyaalee of harkaa qabuunis guyyaa filannoo sanatti buufata irraa fageenya tahe namni fagaachuu akka qabu dubbataa, buufatni filannoos eegumsa guddaadhaan akka eegamu mootummaan wayyaanee humna qabuu fi caasaa isaa jabeeffataa kan jiruudha. Karoora Qeerroo guddaan filannoo mootummaa buufataalee jiran hunda jeequu fi fesheleessuudha kunis Yeroo ammaa dhaabbilee barnootaa yuuniversitiilee keessatti FDG eegale filannoon akka hin adeemamneef taasifamuu eegale, FDG dura dhaabbachuufis humni mootummaa wayyaanee meeshaa barattoota nagaa irratti dhukaasuu fi boombii darbataa jiraachuu gabaasa Qeerroo garagaraa ni hubatama. Akka walii galaatti guyyaa boruu irraa eegalee Finfinnee yuuniversitii, manneen barnootaa sadarkaa garagaraa fi koollejjiwwan keessatti itti fufa. Torbee keessa jirru kana keessa